Russia, ihe nketa na omenala | Akụkọ Njem
Russia, ihe nketa na omenala
Rusia o Russian Federation mejupụtara ọtụtụ n'ime Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe na akụkụ nke North Asia. Nnukwu ókèala nke na-enye onye ọbịa ahụ akara ukwu site n'oge gara aga ọdachi y ebube na, n'oge nke ọ bụla, nwere mmetụta siri ike art, na Ciencia na política site na ebe ozo nke uwa.
Na nke ọ bụla obodo, ma ọ bụ nnukwu ma ọ bụ obere, gafee nnukwu Oghere Russia, e nwere ọtụtụ puku ihe atụ ndị na-akọwa ihe kpatara ya ihe nketa, omenala, nka na ụkpụrụ ụlọ Russia abụwo ya ama ama na nganga.
Ma na mgbakwunye na nke a bara ọgaranya ọdịnala ọdịnala, Russia nwere ọtụtụ ọmarịcha amara ndị ọzọ maka onye ọbịa. Na ọdịdị ala, dị nnọọ iche na iche iche, ndị spas Ọnọdụ ihu igwe dị na mpaghara dị iche iche onodu ubochi Site na Russia.
Gị ogige ntụrụndụ ndị mba, ngụkọta nke 17, ndị nwetara ọnọdụ a na mmalite nke 80s, agaghị ahapụ onye ọbịa ahụ na-enweghị mmasị, n'ihi ha mma y ndọtị, biri ebe hectare 3,6. Ugbu a, na Ọchịchị Russia, enwere mpaghara 75 mechiri emechi nke bi elu ya na 19.970.900 ha.
Na ókèala debeere, ụdị nke 69% nke ụdị nke ndi ahu, 83% nke nnụnụ, 61% nke ihe ndi ozo, 96% nke amphibians, yana 40% nke osisi, chebe site Akwụkwọ Red.
Borsch bụ ofe a maara nke ọma na Russia
La gastronomy, ngwakọta nke kacha mma nke Kichin site n'ebe ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, okpomoku ha ndị mmadụ, n'agbanyeghị oke frio nke na-ekpuchi ala Ndị Russia ọtụtụ afọ, akụkọ ndụ a pueblo na, n'ezie, agaghị emechu ndị na-abanye ma gbalịa ịmata ya obodo, gị campos na nkpuru-obi ha ndị mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Moscow » Russia, ihe nketa na omenala
Ememme na ọdịnala na Bulgaria